डचटाउन ड्राइभ इन फिल्म नाइट • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन ड्राइभ इन फिल्म नाइट
प्रकाशित जुन 15th, 2020
यो DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन ग्रीष्म चलचित्र श्रृंखला २०२० मा फिर्ता आयो! हामी एउटा विशेष ड्राइभ-इन चलचित्र घटनाको साथ चीजलाई लात हान्दैछौं मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास सुरक्षित समुदाय निर्माण र सामाजिक दूरी प्रचार गर्न।
हामीसँग शुक्रबार, जून २th मा सामेल हुनुहोस्! हाम्रो ड्राइव-इन चलचित्र रात क्लासिक गर्मी ब्लकबस्टर फिचर गर्दछ स्वतन्त्रता दिवस विल स्मिथ अभिनीत।
धेरै साँझ :7: .० मा खुल्नेछ। तपाईंको स्थान प्रारम्भमा पाउनुहोस् र प्रायोजक पूर्वावलोकनहरू, छिमेकी समुदाय निर्माण जानकारी, फूड ट्रकहरू, र अधिक समात्नुहोस्!
एक पटक सूर्य अस्ताए पछि, चलचित्र हेबिटाटको भवनको छेउमा प्रोजेक्ट गरिनेछ। ध्वनि तपाईंको कारको एफएम रेडियोमा प्रसारित हुनेछ, मात्र ट्युन इन।
त्यहाँ छ फेसबुक घटना पृष्ठ यदि तपाईं आफ्ना साथीहरू र छिमेकीहरूसँग साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईं पनि जान सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/movienight यस घटनाको बारे जानकारीको लागि र अन्य ग्रीष्ममा बाँकीको लागि।
हाम्रो प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद जसले यस घटना र डाउनटाउन डचटाउन ग्रीष्म चलचित्र श्रृंखला सम्भव बनाउँदछन्: डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र लुथरन विकास समूह.
जटिल मौसमको मामलामा, यो घटना पुनः अनुसूचित हुनेछ। भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/movienight अद्यावधिकहरूको लागि।
तल दायर गरिएको डचटाउन कार्यक्रमहरू. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. DT2, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, डचटाउन कार्यक्रमहरू, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, र थॉमस डन लर्निंग सेन्टर. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुन 19th, 2020 .
DutchtownSTL.org डचटाउन कार्यक्रमहरू डचटाउन ड्राइभ इन फिल्म नाइट